माइक्रोसफ्ट: कृपया मलाई तपाइँको फेरारी मेलिंग सूचीमा थप्नुहोस् Martech Zone
माइक्रोसफ्ट: कृपया मलाई तपाइँको फेरारी मेलिंग सूचीमा थप्नुहोस्
शुक्रबार, डिसेम्बर 29, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यो rant समय हो। (यदि तपाईं अहिले मलाई चित्रमा देख्न सक्नु हुन्छ भने, म मेरो औंला ठोकरिरहेको छु र लुइस ब्ल्याकलाई जस्तै उनको भलाइमा।)
धेरै ado बारेमा केही माथि ब्लागोस्फीयर अहिले किनभने माइक्रोसफ्ट विस्टाको साथ केहि फेरारी ल्यापटपहरू पठायो पूर्व-लोड ए-सूची ब्लगरको संख्यामा। मानिसहरु बाहिर आउँदैछन्। यो माइक्रोसफ्टले चुनाव वा केही किन्दै छ, वा तिनीहरू JFK मार्ने पछाडि छन्, वा तिनीहरूले उत्तर कोरियालाई आम विनाशको हतियार बेचिदिएका छन्।
म यो एक मा Scoble संग छु!
मान्छेहरू उठ्नुहोस्, यो व्यवसाय हो! यो सबै लगानीकर्ताले पैसा लगानी गर्नुको प्राथमिक कर्तव्य हो जहाँ यसले सबैभन्दा धेरै खरीददारहरू ... अवधिलाई असर गर्छ। तपाईसंग बजेट छ, तपाईले यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्नु हुन्छ। यहाँ अपवादहरू छन्:
माइक्रोसफ्टले ब्लगरहरूको माग राख्दछ (उनीहरूले कुनै पनि बनाएन)
उम्म, त्यो थियो।
यो शाकलाई नयाँ जोडी अनुकूलन गरिएको स्नीकरहरू बर्षको प्रत्येक दिनको लागि भन्दा फरक छैन। के प्रत्येक अन्य बच्चाहरू बास्केटबल खेल्दै उनीहरूको मोमीलाई रोइरहेका छन् कि शाकलाई नि: शुल्क स्नीकरहरू भेटिए तर तिनीहरूले सकेनन्? होईन! आमा आटा बनाइरहनुभएको छ किनकि शाक एक प्रभावशाली छ र उनी cra गुणा बढी तिर्दैछिन् जुन उनीले क्राप्पी स्नीकरहरूको लागि दिनु पर्छ।
के कहिल्यै नास्कर रेसको अन्त्य देख्नुहुन्छ? ड्राइभरले एक टोपी राख्दछ, ब्राण्ड नाम सोडाको पेय लिन्छ, अर्को टोपीमा फाल्दछ (ती दुबै ठूला गधा लोगोहरू हुन्), र उसले प्रत्येक वाक्य5प्रायोजक नामहरूको साथ सुरू गर्दछ। "ठिकै छ, मैले तपाईंलाई जिम, यो डुप्न्ट, रीस, तोशिबा, लेवीको, शेभरोलेटलाई राम्रो भन्न सकिन। के कोही नासार चिच्याउँदै बाहिर जाँदै छ, "तपाईले मलाई त्यो सबै ब्रान्डको विज्ञापनको साथ प्रभाव पार्न खोज्नु भएको छ!"! होईन
सायद टाइगर वुड्सको शर्टमा अस्वीकरण हुनुपर्दछ जुन क्लब उसले प्रयोग गरिरहेको थियो वास्तवमा उसलाई दिइएको थियो, वा बलहरु, वा क्याडिलाक। मान्छेहरू, जीवन प्राप्त गर्नुहोस्। हामी राजनेता होइनौं। हामी अखबारमा छैनौं जहाँ पत्रकारिता र विज्ञापनको लाइन अलग गर्नु आवश्यक छ किनकि प्रभावको भालाले चुनावको निर्णय गर्न सक्छ। मैले कसम खाएको छैन वा कसैलाई कसम गरेको छैन। म ब्ल्गर हुँ मसँग एक दिन readers०० पाठकहरू छन् र मेरो सम्बद्ध मार्केटिंगले मेरो इन्टरनेट पहुँचको लागत पनि कभर गर्दैन।
एक मात्र व्यक्ति जसको आफ्ना पाठकहरूको दायित्व छ ब्लगर हो, माइक्रोसफ्ट होइन। पहिलो ब्लगरहरूले उनीहरूको ल्यापटपहरू पाए र पहिलो चीज उनीहरूले ब्लगमा लिए? नमस्ते, मैले यो शीतल ल्यापटप माइक्रोसफ्टबाट पाएँ। अन्दाज गर्नुहोस्?! त्यो खुलासा थियो र अब तपाईंलाई थाहा छ।
म व्यक्तिगत रूपमा ल्यापटप र भिस्टा वितरण गर्न माइक्रोसफ्ट चाहन्छु। म यो कसरी चल्छ भन्ने बारे सुन्न चाहन्छु, कि यो पैसाको लायक छ वा छैन। माइक्रोसफ्टले मलाई तपाईंको सूचीमा राख्यो! मेरा पाठकहरू जान्न चाहन्छन्!
यस सम्पूर्ण गिरावटमा गरिएको गलती केवल माइक्रोसफ्टको पछाडिको पेडलिंग थियो। यहाँ यो छ कि यो मार्केटिंग गर्दै मसँग कसरी जान्छ:
ब्लगरबाट प्रश्न (whiny आवाज): श्री एविल माइक्रोसफ्ट! हामीले सुनेका छौं कि तपाईंले Vista मा पूर्व लोड गरिएको केही महँगो ल्यापटपहरू ए-सूची ब्लगरहरूमा वितरण गर्नुभयो। हामी सोच्दछौं कि यी ब्लगरहरू यी भव्य उपहारहरूको साथ उनीहरूलाई प्रभाव पार्ने कोशिश गर्दै हुनुहुन्छ आशामा कि तिनीहरू आफ्नो भिस्टा अनुभवको बारेमा सकारात्मक ब्लगमा आकर्षित हुनेछन्। के यो सत्य हो?
बाट प्रतिक्रिया Douglas Karr, माइक्रोसफ्टको VP मार्केटिंग (वास्तविक रूपमा तथ्य): हो, डम्बास। त्यो मेरो काम हो।
माइक्रोसफ्टले मलाई यो पोष्टको लागि केहि पनि भुक्तान गरेको छैन। वास्तवमा, म यसलाई म्याकबाट पोष्ट गर्दैछु।
मैले प्याट कोयलबाट केही पटकको लागि केही टिकटहरू पाएँ। के सबै संग ठीक छ? मैले आफ्नो ब्लगको साथ एक टन मद्दत गरें र उसले केहि हप्ता अघि उनीसँग मलाई आश्चर्य चक्यो। के तिमी मसँग रिसाएका छौ? के मैले बदलामा मेरो कुनै पनि घर जग्गा सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको छ? हुनसक्छ, म वास्तवमै निश्चित छैन। उहाँ एक राम्रो ब्लगको साथ राम्रो मान्छे हो त्यसैले म यसलाई प्राय जसो संदर्भ गर्दछु। यसलाई पढ्नुहोस्! के तपाईंले तिनीहरूको नयाँ विजेट पाउनुभयो? यो साँच्चिकै राम्रो छ, यहाँ तपाईं जानुहुन्छ:
यो ब्लग PHP र MySQL र प्लगइनहरूको समूहको साथ सिर्जना गरिएको हो जुन एकदमै १००% निःशुल्क थियो। र म तिनीहरूलाई माया गर्छु! अब तीनीहरूलाई चिन्नुहोस्, यो नि: शुल्क मलाई दिनुहोस्को लागि, हैन ?!
टेक्नोराटीको साथ ब्लग पोष्टहरूको लागि खोजी गर्दै
ब्रान्ड सहायता: ब्रान्डि ofको राज्य
मार्क्स 15, 2008 मा 4: 17 PM